ဖတျမရသူတအေောကျအထိဆှဲကွညျ့ပါ Soul land နိုဗယျ2အပိုငျး 30 ဇာတျသိမျးပိုငျး - kokochitchit.xyz
July 23, 2021 ko ko knowledge 0
အပိုငျး ၃၃ ဇာတျသိမျးယှီယောကျက ခြိုကျထုနျကို ဝိဥ၊ဉျဝမြှေလိုကျခြိနျမှာ တဈခုခု မှားလာတာကို အာရုံခံစားမိတယျ။ ” အကို ဟေ…သတိထား..”။ ဟခြေိုကျထုနျဆီကို သတ်တု ဘောလုံး ၂ လုံး ပဈလာတယျ။ ခြိုကျထုနျလျွဆီကနေ အဖွူရောငျလငျးတနျ ထှကျလာပွီး..ထို သတ်တုဘောလုံးကို ပဈလိုကျကာ ကွမှေသှားတယျ။ ယှီဟောကျက ကွောငျသှားပွီး ” ဒါက..ဝိဥာဉျလကျနကျရဲ့ စှမျးအားတှလေား? ဒါက ထိတျလနျ့စတေဲ့မွငျကှငျးပါ.. သူတှခေဲ့တဲ့ ခြိုကျထုနျက မှနျစတားတဈယောကျလို ခှနျအားကွီးပွီး ပွောငျးလဲသှားတယျ။ ထို့နောကျ ခြိုကျထုနျက သူ့ရဲ့ သတ်တု အကြီင်ျကို ပွနျရုတျသိမျးလိုကျပွီး ယှီဟောကျဆီကိုပွနျလြှောကျလာလိုကျတယျ။ ဖနျယု့ ယှီဟောကျကို ကွညျ့ပွီး ပွုံးလိုကျကာ ” မငျးဘယျလိုထငျလဲ?”၊ ယှီဟောကျက ” ဒါက…အရမျး စှမျးအားကွီးတာပဲ “။
ဖနျယု့က ” ခြိုကျထုနျရဲ့ ကငျြ့စဉျက ကနျ့သတျထားတဲ့အတှကျ.. ဝိဥာဉျလကျနကျ တဈစိတျတဈပိုငျးရဲ့ စှမျးအားကိုပဲ ထုတျနိုငျခဲ့တယျ။ အခုတော့ သူက အဆငျ့မွငျ့ ပုံသေ ဝိဥာဉျလကျနကျတှကေို အသုံးပွုလို့မရသေးဘူး။ ငါသိတယျ.. ဒီ ဝိဥာဉျလကျနကျမာစတားက သိုငျးဝိဥာဉျမာစတားကို ဘယျလိုလုပျပွီး..တိုကျခိုကျမှာလဲ ဆိုတာကို မငျးသိခငျြနမှောပေါ့၊ ငါမငျးကို ပွောပွလိုကျမယျ။ ဝိဥာဉျအဆငျ့..၇၀ အောကျကဆိုရငျ..ငါတို့ရဲ့ ဝိဥာဉျလကျနကျက..သူတို့ထကျကိုသာတယျ။ ဝိဥာဉျ အဆငျ့ ၇၀ ကြျောသှားရငျတော့..သိုငျးဝိဥာဉျဌာနက လူတှကေ သာသှားတယျ။ဒါ ပမေယျ့..ငါတို့ရဲ့ ဝိဥာဉျကုနျးမွမှော သိုငျးဝိဥာဉျကို လလေ့ာကွပွီး..တဈခွားကုနျးမွကေ လူတှဟော..ဝိဥာဉျလကျနကျကို လလေ့ာကွတယျ။ ဝိဥာဉျလကျနကျက အခြိနျတို အတှငျးမှာ..ပိုအားကွီးတဲ့ စှမျးရညျကို ပေးဆောငျလို့ပဲ ။
ဖနျယု့ရဲ့ ရှငျးပွခကျြကွောငျး..ဝိဥာဉျလကျနကျရဲ့ အခွခေံ သဘောတရားကို ယှီဟောကျ နားလညျလာတယျ။ တကယျလို့ ရနျသူက ဝိဥာဉျကှငျး ၄ ကှငျးအထကျ မဟူတျရငျ.. ခြိုကျထုနျရဲ့ ဝိဥာဉျလကျနကျကို ယှဉျနိုမှာ မဟုတျဘူး။ အခု ယှီဟောကျကို ပိုပွီး ဝိဥာဉျလကျနကျထဲမှာ စိတျဝငျစားလာစတေယျ။ ဖနျယု့က ” အခု ဝိဥာဉျလကျနကျ ဌာနက သိုငျးဝိဥာဉျဌာနထကျ အားနညျးတယျ။ ဒါကွောငျ့..ဝိဥာဉျလကျနကျကို ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ အသုံးပွုနိုငျတဲ့သူ လိုအပျတယျ။ ငါမှာ ခြုကျထုနျ ဆိုတဲ့ တဈပညျ့တဈယောကျပဲရှိနတေယျ။ မငျးသာ စိတျဝငျစားရငျ နောကျထပျ တပညျ့တဈယောကျ ငါလကျခံမယျ။ ယှီဟောကျက သဘောပေါကျနားလညျမွနျတဲ့အတှကျ..ဒူးထောကျလိုကျပွီး ” ဆရာဖနျယု့..ကတြျော့ကို တပညျ့အဖွဈ လကျခံပေးပါ..၊ ဒီ ဝိဥာဉျလကျနကျကို ကတြျောကွိုးစား သငျယူပါ့မယျ” ။
ဖနျယု့က ” မငျးဆီက သတငျးတှေ ဆရာမကြော့ဆီကနေ ငါကွားရပါတယျ။ မငျးကို ငါရဲ့ နောကျဆုံးတပညျ့အဖွဈ လကျခံလိုကျမယျ။ ခြိုကျထုနျနဲ့ မငျးကို ငါ သခြောသငျကွားပေးမယျ။ ဒါမှ တဈနကေ့ရြငျ..သိုငျးဝိဥာဉျဃာနကို ငါတို့ရဲ့ လကျနကျဝိဥာဉျက ဘယျအဆငျ့ထိ ရောကျလဲဆိုတာကို ပွမယျ။ ယှီဟောကျကို မငျးကို တပညျ့အဖွဈ လကျခံပေးရုံသာမက..အတှငျးစညျးတပညျ့အဖွဈမငျးကို သတျမှတျလိုကျပွီး။ သိုငျးဝိဥာဉျဌာနက မငျးကို အတှငျးစညျး တပညျ့အဖွဈ လကျမခံတာက.. ကတြျောအခု အတှငျးစညျးတပညျ့ဖွဈသှားပွီး? သိုငျးဝိဥာဉျဌာနဲ့ ဒီ လကျနကျဝိဥာဉျဌာနရဲ့ သူ့ကို ဆကျဆံတဲ့ပုံက အရမျးကို ကှာခွားတယျ။ ” ဆရာ..” ဆိုပွီး..ယှီဟောကျမကျြရညျတှကေလြာတယျ။
ဖန့ယု့ သူ့ရဲ့ ပခုံးကို ကိုငျလိုကျပွီး..” လိမျမ်မာတဲ့ ကလေး..မငိုပါနဲ့၊ မငျးစိတျထိခိုကျနတောကို ငါသိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့..အဲဟာကို ထုတျပဈဖို့အတှကျ..မငျးရဲ့ ကိုယျပိုငျစှမျးစကို အားကိုးရမယျ။ ယှီဟောကျခေါငျးညှိတျလိုကျတယျ။ ခြိုကျထုနျက ” အခု ငါမှာ ညီလေးတဈယောကျရပွီး..ဟား.ဟား..၊ ကောငျးတယျ..ငါ တဈယောကျထဲ မပငျြးတော့ဘူး။ ယှီဟောကျ..ငါတို့ အခု ညီအကိုလို ဖွဈသှားပွီး”။ ဖနျယု့က ” ယှီဟောကျ..မငျးက ငါတို့ ဝိဥာဉျလကျနကျဌာနရဲ့ အတှငျးစညျး တပညျ့ ဖွဈလာပမေယျ့..မငျးရဲ့ သိုငျးဝိဥာဉျ အခွခေံ ကငျြ့စဉျကိုတော့..လကေ့ငျြ့ရအုံးမယျ။ ဒါကွောငျ့ သိုငျးဝိဥာဉျ ဌာနမှာ တတိယနှဈ အထိ..မငျးရဲ့ သိုငျးဝိဥာဉျကို ကငျြ့ကွံရမယျ။ ဝိဥာဉျစှမျးအား အဓိက အရငျမွဈပဲ..။ အနာဂတျမှာ မငျးကို ကြှမျးကငျြတဲ့ လကျနကျဝိဥာဉျမာစတားတဈယောကျ ဖွဈလာစခေငျြသိလု.. ထိနျးခြုပျတဲ့ သိုငျးဝိဥာဉျမာစတားလဲ ဖွဈလာစခေငျြတယျ ။
ဖနျယု့က ဆကျပွီးတော့..” မငျးကို ငါ မလြိုဝှကျတော့ဘူး..အမှနျတော့..သိုငျးဝိဥာဉျဌာနက ငါတို့ဝိဥာဉျလကျနကျ ဌာနရဲ့ ပွိုငျဘကျပဲ။ အခု မငျးက ငါတို့ဌာနရဲ့ အတှငျးစညျးတပညျ့ဖွဈသှားတာကို အခြိနျတိုငျတာ တဈခုအထိ လြိုဝှကျထားပေးရမယျ။ သိုငျးဝိဥာဉျဌာနရဲ့ အတှငျးစညျးတပညျ့လဲ မဖွဈရဘူး။ ပုံမှနျဆိုရငျ မငျးရဲ့ အတနျး ခြိနျက နလေ့ယျမှာ ပွီးရငျ..အဲနောကျပိုငျး..ငါတို့ဌာနမှာ တဈနေ့ ၂ နာရီ မငျးလလေ့ာရမယျ။.. ပိတျရကျရှိပမေယျ့..အဲပိတျရကျကိုလဲ မငျးလာရမယျ… ကွိုးစားရမှာကို မငျးကွောကျနလေား? ယှီဟောကျကဘ” ကတြျော မကွောကျပါဘူး..” သိုငျးဝိဥာဉျဌာနရဲ့ အားသာခကျြက..သူတို့တှေ ဂိဥာဉျကှငျးကို ရှာပေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယှီဟောကျမှာ..ရခေဲပိုးကောငျရှိနတေယျ။ ဒါကွောငျ့..ဝိဥာဉျကှငျး ကိစ်စ သူမစိုးရိမျရဘူး။အခုတောငျ သူက သိုငျးဝိဥာဉျဌာနရဲ့ ယာယီ အတှငျးစညျးတပညျ့ကို လကျခံရထားပွီး ။
ဖနျယု့က ” မငျး မကွောကျရငျ..ငါ မငျးကို အစှမျးကုနျသငျပေးမယျ”။ ထိုအခြိနျမှာပဲ ယှီဟောကျရဲ့ လျာပငျမှာ အမဲရောငျ ဆှဲကွိုး တဈခြောငျး ” ဒီဟာနဲ့ဆိုရငျ..ဝိဥာဉျလကျနကျ အပွငျစညျးမှာ မငျးကွိုကျတဲ့နရော သှားလာလို့ရတယျ။ အိုခေ..ဒီလောကျပဲ ပွောတော့မယျ..မနကျဖွနျကစပွီး..မငျးဒီကို စလာလို့ရပွီး.. အခု မငျးက အတနျးသဈ ဖှငျ့ တော့မယျဆိုတော့..မွနျမွနျပွနျသှားလိုကျတော့..”။” ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာဖနျယု့”။ ဆရာမကြော့နဲ့ ယှီသောကျတို့ ထှကျသှားပွီးနောကျမှာ ဆဏာဖနျယု့ရဲ့ မကျြနှာမှာ..အပွုံးတှပေေါလာတယျ ။ ခြိုကျထုနျက ” ကတြျော ညီလေး တဈယောကျရသှာတား ကောငျးတယျ..ဒါမှ ဆရာ့ရဲ့ ညှဉျးပနျးမှုဒဈကို တဈယောကျထဲ မခံရတော့ဘူး..”။ ဖနျယု့က ” မငျးကို ငါ ညှဉျးပနျးတယျ?..သှားလကေ့ငျြ့တော့..”။
ခြိုကျထုနျထှကျသှားပွီးနောကျမှာ..ဝိဥာဉျလကျနကျဌာနရဲ့ ဒုကြောငျးအုပျဖွဈတဲ့ ကငျြတောကျဒူက ဖနျယု့ဆီကို ရောကျလာကာ ” မဆိုးဘူး..ဆငျဆငျပွပွေနေဲ့ပွီးသှားတယျ၊ ဒီလူငယျ ယှီဟောကျက မြိုးစကေ့ောငျးပဲ။ ဖနျယု့.. မငျးသူတို့အပျေါ ဘယျလောကျမြှျောမှနျးထားလဲ? ဖနျယု့က ” ကတြျောတို့ထုတျမယျ့ လကျနကျကို..ခြိုကျထုနျက ၄၀ % ရမယျထငျပွီး။ ယှီဟောကျက ၇၀ %လောကျရမယျ။ သူတို့က အတူတူတိုကျခိုကျရငျ..လကျနကျရဲ့ အရညျအသှေးကို ၁၀၀ % ရမယျ။ သူတို့သာ..ကတြျောတို့အသကျအရှယျလောကျဖွဈလာရငျ.. ကတြျောတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြက ပေါကျရောကျပွီး..”။ ကငျြတောကျဒူက ” ကောငျးတယျ..သူတို့သာ..ဒီ ဝိဥာဉျလကျနကျရဲ့ စဈသားတှေ ရလာရငျ..မငျးက..ဒီဌာနရဲ့ နောကျကြောငျးအုပျရာထူးရလာမယျ။ ဒါကွောငျ့..အခု..ဌာနရဲ့.. အရငျးမွဈဝငျငှေ အားလုံကို..မငျးကို သုံးခှငျ့ပေးလိုကျမယျ..”။
ဖနျယု့က ” ကတြျောက ရာထူးရခငျြလို့..ဒီ ဝိဥာဉျလကျနကျ စဈသားတှကေို မှေးထုတျနတော မဟူတျဘူးဆိုတာ..ကြောငျးအုပျကငျြလဲ သိပါတယျ”။ ကငျြတောကျဒူက ” ငါသိပါတယျကှာ..တကယျလို့ ငါတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြသာ ပေါကျမွောကျလာရငျ..ဒီ ဝိဥာဉျကုနျးမွမှော သမိုငျးရေးလို့ရပွီး..”။ ဖနျယု့က ” တကယျလို့..ယှီဟောကျရဲ့ သိုငျးဝိဥာဉျက..ဒီလိုမြိုး..တိုးတကျလာနရေငျ..ကတြျောတို့ အောငျမွငျမှာ သခြောတယျ။ သိုငျးဝိဥာဉျဌာနက ခန်ဓာကိုယျ သိုငျးဝိဥာဉျနဲ့လူကို မလိုလားအပျပမေယျ့..ကတြျောတို့က လိုအပျတယျ။ အခု သူ့မှာ ၁၀ နှဈ သကျတမျး ဝိဥာဉျကှငျး ရှိနလေို့ရော ဘာဖွဈလဲ..? ကတြျောသိရသလောကျက..သူ့ရဲ့ ဝိဥာဉျကှငျးက.. နှဈ ၁၀၀ သကျတမျး ဝိဥာဉျကှငျးတှေ ထကျတောငျ ပိုကောငျးသေးတယျ။ ဆရာမကြော့ရိပွောတာကတော့.. ဒီ ၃ လအတှငျးမှာပဲ သူ့ရဲ့ ဝိဥာဉျအဆငျ့က ၁၃ ကနေ ၁၈ ကို ရောကျသှားတယျ။
ဒီလိုမြိုး ကွီးထှားမှု နှုနျးက..အသုံးမကဘြူးလို့ ပွောလို့ရမလား? ကငျြတောကျဒူက ” ဆရာမကြော့ကတော့..တကယျ့ အသကျကွီး ဝါရငျ့ ဆရာမတဈယောကျလို နနေတေယျ..ဒါကိုရော မငျး ဂရုမစိုကျဘူးလား? နဘေ့ကျမှာ သူမ ဘယျလောကျထိ ကွမျးကွုတျနပေါစေ..ညဘကျရောကျလို့..နူးညံ့လာရငျရပွီး”။ ဖနျယု့က ” သူမကို ကတြျော ထိနျးခြုပျနိုငျမယျလို့ထငျလား?ထို့ နောကျဆရာမကြော့က ယှီဟောကျကို သူ့ရဲ့ အတနျးဆီ မချေါသှားပဲ..” ယှီဟောကျ..ခုနက နငျ ဒါရိုကျတာ ဒူဝလေနျနဲ့ တှတေဲ့အခြိနျမှာ..နငျရဲ့ ပေါငျးစပျသိုငျးဝိဥာဉျ သကျရောကျမှုအကွောငျးကို သူ့ကို မေးလိုကျသေးလား? နို..ယှီဝေါကျ ခေါငျးခါလိုကျတယျ။ ဆရာမကြော့ရိက ” မဖွဈဘူး…နငျရဲ့ ပေါငျးစပျသိုငျးဝိဥာဉျစှမျးအား အကွျောူးကို မသိပဲ..နောကျထပျ ပွိုငျပှဲမှာ နငျဘယျလို မသုံးပွုရမလဲ? ဒီလို လုပျလိုကျ..နငျပွနျသှားတဲ့အခါကရြငျ..ဝမျတုံကို…ဒီအကွောငျး..ဒါရိုကျတာ ဒူဂလေနျဆီ ပေးမေးခိုငျးလိုကျ။ ဝမျတုံ..? ယှီဟောကျ ကွောငျသှားတယျ။
ဆရာမကြော့ပွုံးပွလိုကျပွီး… ” နငျက ဝိဥာဉျလကျနကျရဲ့ အတှငျးစာညျးတပညျ့ဖွဈသှားပွီးလေ..ဒါကွောငျ့.. ဒါရိုကျဒူနဲ့ နီနီကပျကပျမနပေဲ..ဝေးဝေးရှောငျပါ။ ဆရာဝမျရနျက နငျကို..အရမျး သဘောကနြတော..ဒါကွောငျ့..နငျလလေ့ာနတေဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို နှိပျခထြားရမယျ။ နငျ နညျးနညျးတော့..ရှုပျသှားလိမျ့မယျ။ ဆရာဖနျယု့က နငျကို..ပိုတျောတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈအောငျ သူသငျပေးလိမျ့မယျ..၊ ငါအပါအဝငျပေါ့။ ငါက သိုကျးဝိဥာဉျဌာနက ဖွဈပွီး..ဘာလို့ ဝိဥာဉျလကျနကျ ဌာနကို မကျြနှာသာပေးတာလဲဆိုတာ နငျသိခငျြမှာပေါ့..။ ငါပွောပွလိုကျမယျ.. ဆရာဖနျယု့က..ဆရာမရဲ့ ယောကျြားပဲ😱၊ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ယောကျြားကို ပိုအားပေးရမှာပေါ့”။ ထိုအခြိနျမှာပဲ..ဆရာမကြော့က သူမရဲ့ ဘယျဘျွပါးကနသေူမကပျထားတဲ့ မကျြနှာဖုံးကို ခှာပွလိုကျတယျ။ ယှီဟောကျ ” စိနျစပျတဲ့ ဆရာမကြော့က ဖှားဖှားက ဒီလောကျထိ လှပနမေယျလို့ မထငျထားခဲ့ဘူး။
ဆရာမကြော့က သူမရဲ့ မကျြနှာဖုံးကို ပွနျကပျလိုကျတယျ ” ငါရဲ့ သငျကွားမှု နညျးစနဈကွောငျ့ ငါဒီလိုမြိုး..ရုပျဖကျြထားရတယျ။ အရငျ ငါတို့ သငျနကွေ အခနျး ၁ ဆီကိုပဲ ပွနျသှားလိုကျ။ နငျက ဆရာဖနျယု့ရဲ့ အတှငျးစညျး တပညျ့ ဖွဈတာကို လြိုဝှကျထားရမယျ။ နောကျပွီး..ညနပေိုငျးမှာ နငျ ငါးကငျရောငျးနတေယျလို့ ငါကွားတယျ။ အဲတာကို ရပျလိုကျတော့..နောကျဆို နငျမှာ အခြိနျမပိုတော့ဘူး။ စိတျမပူပါနဲ့..နငျရဲ့ ကုနျကစြရိတျကို ဝိဥာဉျလကျနကျဌာနက စီစဉျပေးမယျ။ ဒီဌာနက နငျကို ဘယျလို ပွုမူဆကျဆံလဲ ဆိုတာ နငျသိလာလိမျ့မယျ။ ဟုတျကဲ့ ဆိုပွီး ယှီဟောကျ..အတနျးထဲကို သှားလိုကျတယျ။ ” အတနျးထဲ ဝငျပါရစေ..”ယှီသယေကျအျောလိုကျတယျ။ ” ဝငျလာပါ..” ဆရာဝမျရနျ ပွနျပွောလိုကျတယျ။ ယှီဟောကျအတနျးထဲ ဝငျလာခြိနျမှာ..ကြောငျးသားတှေ အာူလုံးရဲ့ဘအကွညျ့က သူ့အးဆီ ရောကျသှားကွတယျ။ ပထမနှဈရဲ့ အတနျး၎ တနျးထဲမှာ ပထမနှဈက သနျမာဆုံးအတနျးပဲ။ ဝမျရနျ ပွုံးလိုကျပွီး ” ယှီဟောကျ..မငျးလာတာ အခြိနျကိုကျပဲ..ငါတို့အခု..အခနျးး ၁ ရဲ့ အတနျခေါငျးဆောငျရှေးဖို့ ဆေ့းနှေးနတော။ ကြောငျးငါးတှေ ခှဲလိုကျပမေယျ့… ဝမျတုံ၊ယှီဟောကျ ရှောငျရှောငျတို့က တဈတနျးထဲမှာ ထိုငျရတယျ။ တိုကျဟူဘငျ၊ ကြူလု့နဲ့ ခြိုကျရာ့ကြိတို့က သူ့ရဲ့ အနောကျ ၂ တနျးမှာ ထိုငျနတေယျ။ ဝမျရနျက ” အခု..အတနျးခေါငျးဆောငျနဲ့ ဒု အတနျခေါငျးဆောငျကို ရှေးခယျြနတေယျ။ ငါတို့အတနျးမှာ.. တိုကျခိုကျရေးနဲ့ ထိနျးခြုပျရေးဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိတာနှငျ့အညီ..အတနျးခေါငျးဆောငျ ၂ယောကျက တဈခုစီ တာဝနျယူရမယျ။ လတိုငျး အတနျးခေါငျးဆောငျရှေးခယျြမယျ၊ အခု အရငျဆုံး..မဲထညျ့ခိုငျးမယျ။ဝမျရနျက ကြောငျးသငျပုနျးမှာ တိုကျခိုကျရေးသမားနဲ့ ထိနျးခြုပျရေးသမား နာမညျရေးလိုကျတယျ။ တိုကျခိုကျရေးစာရငျးထဲမှာတော့..ဝမျတုံ၊ တိုကျဟူဘငျ၊ ကြော့စီခနျြ၊ဟနျခြူထငျ နဲ့ဝူဖုနျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိနျးခြုပျ ဝိဥာဉျမာစတား စာရငျးထဲမှာတော့.. ယှီဟောကျ၊ ကောကငျြရှနျ၊ လနျ စုစုနဲ့ လနျလု့လု့တို့ရဲ့ နာမညျကို ရေးခလြိုကျတယျ အပိုငျး ၃၄ မြှျော
အပိုင်း ၃၃ ဇာတ်သိမ်းယွီယောက်က ချိုက်ထုန်ကို ဝိဥ၊ဉ်ဝေမျှလိုက်ချိန်မှာ တစ်ခုခု မှားလာတာကို အာရုံခံစားမိတယ်။ ” အကို ဟေ…သတိထား..”။ ဟေချိုက်ထုန်ဆီကို သတ္တု ဘောလုံး ၂ လုံး ပစ်လာတယ်။ ချိုက်ထုန်လ်ဆြီကနေ အဖြူရောင်လင်းတန် ထွက်လာပြီး..ထို သတ္တုဘောလုံးကို ပစ်လိုက်ကာ ကြေမွသွားတယ်။ ယွီဟောက်က ကြောင်သွားပြီး ” ဒါက..ဝိဥာဉ်လက်နက်ရဲ့ စွမ်းအားတွေလား? ဒါက ထိတ်လန့်စေတဲ့မြင်ကွင်းပါ.. သူတွေ့ခဲ့တဲ့ ချိုက်ထုန်က မွန်စတားတစ်ယောက်လို ခွန်အားကြီးပြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ထို့နောက် ချိုက်ထုန်က သူ့ရဲ့ သတ္တု အကျီင်္ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး ယွီဟောက်ဆီကိုပြန်လျှောက်လာလိုက်တယ်။ ဖန်ယု့ ယွီဟောက်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက်ကာ ” မင်းဘယ်လိုထင်လဲ?”၊ ယွီဟောက်က ” ဒါက…အရမ်း စွမ်းအားကြီးတာပဲ “။
ဖန်ယု့က ” ချိုက်ထုန်ရဲ့ ကျင့်စဉ်က ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်.. ဝိဥာဉ်လက်နက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရဲ့ စွမ်းအားကိုပဲ ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူက အဆင့်မြင့် ပုံသေ ဝိဥာဉ်လက်နက်တွေကို အသုံးပြုလို့မရသေးဘူး။ ငါသိတယ်.. ဒီ ဝိဥာဉ်လက်နက်မာစတားက သိုင်းဝိဥာဉ်မာစတားကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး..တိုက်ခိုက်မှာလဲ ဆိုတာကို မင်းသိချင်နေမှာပေါ့၊ ငါမင်းကို ပြောပြလိုက်မယ်။ ဝိဥာဉ်အဆင့်..၇၀ အောက်ကဆိုရင်..ငါတို့ရဲ့ ဝိဥာဉ်လက်နက်က..သူတို့ထက်ကိုသာတယ်။ ဝိဥာဉ် အဆင့် ၇၀ ကျော်သွားရင်တော့..သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနက လူတွေက သာသွားတယ်။ဒါ ပေမယ့်..ငါတို့ရဲ့ ဝိဥာဉ်ကုန်းမြေမှာ သိုင်းဝိဥာဉ်ကို လေ့လာကြပြီး..တစ်ခြားကုန်းမြေက လူတွေဟာ..ဝိဥာဉ်လက်နက်ကို လေ့လာကြတယ်။ ဝိဥာဉ်လက်နက်က အချိန်တို အတွင်းမှာ..ပိုအားကြီးတဲ့ စွမ်းရည်ကို ပေးဆောင်လို့ပဲ ။
ဖန်ယု့ရဲ့ ရှင်းပြချက်ကြောင်း..ဝိဥာဉ်လက်နက်ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားကို ယွီဟောက် နားလည်လာတယ်။ တကယ်လို့ ရန်သူက ဝိဥာဉ်ကွင်း ၄ ကွင်းအထက် မဟူတ်ရင်.. ချိုက်ထုန်ရဲ့ ဝိဥာဉ်လက်နက်ကို ယှဉ်နိုမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခု ယွီဟောက်ကို ပိုပြီး ဝိဥာဉ်လက်နက်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားလာစေတယ်။ ဖန်ယု့က ” အခု ဝိဥာဉ်လက်နက် ဌာနက သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနထက် အားနည်းတယ်။ ဒါကြောင့်..ဝိဥာဉ်လက်နက်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့သူ လိုအပ်တယ်။ ငါမှာ ချုက်ထုန် ဆိုတဲ့ တစ်ပည့်တစ်ယောက်ပဲရှိနေတယ်။ မင်းသာ စိတ်ဝင်စားရင် နောက်ထပ် တပည့်တစ်ယောက် ငါလက်ခံမယ်။ ယွီဟောက်က သဘောပေါက်နားလည်မြန်တဲ့အတွက်..ဒူးထောက်လိုက်ပြီး ” ဆရာဖန်ယု့..ကျတော့်ကို တပည့်အဖြစ် လက်ခံပေးပါ..၊ ဒီ ဝိဥာဉ်လက်နက်ကို ကျတော်ကြိုးစား သင်ယူပါ့မယ်” ။
ဖန်ယု့က ” မင်းဆီက သတင်းတွေ ဆရာမကျော့ဆီကနေ ငါကြားရပါတယ်။ မင်းကို ငါရဲ့ နောက်ဆုံးတပည့်အဖြစ် လက်ခံလိုက်မယ်။ ချိုက်ထုန်နဲ့ မင်းကို ငါ သေချာသင်ကြားပေးမယ်။ ဒါမှ တစ်နေ့ကျရင်..သိုင်းဝိဥာဉ်ဃာနကို ငါတို့ရဲ့ လက်နက်ဝိဥာဉ်က ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်လဲဆိုတာကို ပြမယ်။ ယွီဟောက်ကို မင်းကို တပည့်အဖြစ် လက်ခံပေးရုံသာမက..အတွင်းစည်းတပည့်အဖြစ်မင်းကို သတ်မှတ်လိုက်ပြီး။ သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနက မင်းကို အတွင်းစည်း တပည့်အဖြစ် လက်မခံတာက.. ကျတော်အခု အတွင်းစည်းတပည့်ဖြစ်သွားပြီး? သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနဲ့ ဒီ လက်နက်ဝိဥာဉ်ဌာနရဲ့ သူ့ကို ဆက်ဆံတဲ့ပုံက အရမ်းကို ကွာခြားတယ်။ ” ဆရာ..” ဆိုပြီး..ယွီဟောက်မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။
ဖန့ယု့ သူ့ရဲ့ ပခုံးကို ကိုင်လိုက်ပြီး..” လိမ်မ္မာတဲ့ ကလေး..မငိုပါနဲ့၊ မင်းစိတ်ထိခိုက်နေတာကို ငါသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်..အဲဟာကို ထုတ်ပစ်ဖို့အတွက်..မင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းစကို အားကိုးရမယ်။ ယွီဟောက်ခေါင်းညှိတ်လိုက်တယ်။ ချိုက်ထုန်က ” အခု ငါမှာ ညီလေးတစ်ယောက်ရပြီး..ဟား.ဟား..၊ ကောင်းတယ်..ငါ တစ်ယောက်ထဲ မပျင်းတော့ဘူး။ ယွီဟောက်..ငါတို့ အခု ညီအကိုလို ဖြစ်သွားပြီး”။ ဖန်ယု့က ” ယွီဟောက်..မင်းက ငါတို့ ဝိဥာဉ်လက်နက်ဌာနရဲ့ အတွင်းစည်း တပည့် ဖြစ်လာပေမယ့်..မင်းရဲ့ သိုင်းဝိဥာဉ် အခြေခံ ကျင့်စဉ်ကိုတော့..လေ့ကျင့်ရအုံးမယ်။ ဒါကြောင့် သိုင်းဝိဥာဉ် ဌာနမှာ တတိယနှစ် အထိ..မင်းရဲ့ သိုင်းဝိဥာဉ်ကို ကျင့်ကြံရမယ်။ ဝိဥာဉ်စွမ်းအား အဓိက အရင်မြစ်ပဲ..။ အနာဂတ်မှာ မင်းကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ လက်နက်ဝိဥာဉ်မာစတားတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေချင်သိလု.. ထိန်းချုပ်တဲ့ သိုင်းဝိဥာဉ်မာစတားလဲ ဖြစ်လာစေချင်တယ် ။
ဖန်ယု့က ဆက်ပြီးတော့..” မင်းကို ငါ မလျိုဝှက်တော့ဘူး..အမှန်တော့..သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနက ငါတို့ဝိဥာဉ်လက်နက် ဌာနရဲ့ ပြိုင်ဘက်ပဲ။ အခု မင်းက ငါတို့ဌာနရဲ့ အတွင်းစည်းတပည့်ဖြစ်သွားတာကို အချိန်တိုင်တာ တစ်ခုအထိ လျိုဝှက်ထားပေးရမယ်။ သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနရဲ့ အတွင်းစည်းတပည့်လဲ မဖြစ်ရဘူး။ ပုံမှန်ဆိုရင် မင်းရဲ့ အတန်း ချိန်က နေ့လယ်မှာ ပြီးရင်..အဲနောက်ပိုင်း..ငါတို့ဌာနမှာ တစ်နေ့ ၂ နာရီ မင်းလေ့လာရမယ်။.. ပိတ်ရက်ရှိပေမယ့်..အဲပိတ်ရက်ကိုလဲ မင်းလာရမယ်… ကြိုးစားရမှာကို မင်းကြောက်နေလား? ယွီဟောက်ကဘ” ကျတော် မကြောက်ပါဘူး..” သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနရဲ့ အားသာချက်က..သူတို့တွေ ဂိဥာဉ်ကွင်းကို ရှာပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ယွီဟောက်မှာ..ရေခဲပိုးကောင်ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့်..ဝိဥာဉ်ကွင်း ကိစ္စ သူမစိုးရိမ်ရဘူး။အခုတောင် သူက သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနရဲ့ ယာယီ အတွင်းစည်းတပည့်ကို လက်ခံရထားပြီး ။
ဖန်ယု့က ” မင်း မကြောက်ရင်..ငါ မင်းကို အစွမ်းကုန်သင်ပေးမယ်”။ ထိုအချိန်မှာပဲ ယွီဟောက်ရဲ့ လ်ာပင်မှာ အမဲရောင် ဆွဲကြိုး တစ်ချောင်း ” ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်..ဝိဥာဉ်လက်နက် အပြင်စည်းမှာ မင်းကြိုက်တဲ့နေရာ သွားလာလို့ရတယ်။ အိုခေ..ဒီလောက်ပဲ ပြောတော့မယ်..မနက်ဖြန်ကစပြီး..မင်းဒီကို စလာလို့ရပြီး.. အခု မင်းက အတန်းသစ် ဖွင့် တော့မယ်ဆိုတော့..မြန်မြန်ပြန်သွားလိုက်တော့..”။” ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာဖန်ယု့”။ ဆရာမကျော့နဲ့ ယွီသောက်တို့ ထွက်သွားပြီးနောက်မှာ ဆဏာဖန်ယု့ရဲ့ မျက်နှာမှာ..အပြုံးတွေပေါလာတယ် ။ ချိုက်ထုန်က ” ကျတော် ညီလေး တစ်ယောက်ရသွာတား ကောင်းတယ်..ဒါမှ ဆရာ့ရဲ့ ညှဉ်းပန်းမှုဒစ်ကို တစ်ယောက်ထဲ မခံရတော့ဘူး..”။ ဖန်ယု့က ” မင်းကို ငါ ညှဉ်းပန်းတယ်?..သွားလေ့ကျင့်တော့..”။
ချိုက်ထုန်ထွက်သွားပြီးနောက်မှာ..ဝိဥာဉ်လက်နက်ဌာနရဲ့ ဒုကျောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့ ကျင်တောက်ဒူက ဖန်ယု့ဆီကို ရောက်လာကာ ” မဆိုးဘူး..ဆင်ဆင်ပြေပြနေဲ့ပြီးသွားတယ်၊ ဒီလူငယ် ယွီဟောက်က မျိုးစေ့ကောင်းပဲ။ ဖန်ယု့.. မင်းသူတို့အပေါ် ဘယ်လောက်မျှော်မှန်းထားလဲ? ဖန်ယု့က ” ကျတော်တို့ထုတ်မယ့် လက်နက်ကို..ချိုက်ထုန်က ၄၀ % ရမယ်ထင်ပြီး။ ယွီဟောက်က ၇၀ %လောက်ရမယ်။ သူတို့က အတူတူတိုက်ခိုက်ရင်..လက်နက်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ၁၀၀ % ရမယ်။ သူတို့သာ..ကျတော်တို့အသက်အရွယ်လောက်ဖြစ်လာရင်.. ကျတော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ပေါက်ရောက်ပြီး..”။ ကျင်တောက်ဒူက ” ကောင်းတယ်..သူတို့သာ..ဒီ ဝိဥာဉ်လက်နက်ရဲ့ စစ်သားတွေ ရလာရင်..မင်းက..ဒီဌာနရဲ့ နောက်ကျောင်းအုပ်ရာထူးရလာမယ်။ ဒါကြောင့်..အခု..ဌာနရဲ့.. အရင်းမြစ်ဝင်ငွေ အားလုံကို..မင်းကို သုံးခွင့်ပေးလိုက်မယ်..”။
ဖန်ယု့က ” ကျတော်က ရာထူးရချင်လို့..ဒီ ဝိဥာဉ်လက်နက် စစ်သားတွေကို မွေးထုတ်နေတာ မဟူတ်ဘူးဆိုတာ..ကျောင်းအုပ်ကျင်လဲ သိပါတယ်”။ ကျင်တောက်ဒူက ” ငါသိပါတယ်ကွာ..တကယ်လို့ ငါတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်သာ ပေါက်မြောက်လာရင်..ဒီ ဝိဥာဉ်ကုန်းမြေမှာ သမိုင်းရေးလို့ရပြီး..”။ ဖန်ယု့က ” တကယ်လို့..ယွီဟောက်ရဲ့ သိုင်းဝိဥာဉ်က..ဒီလိုမျိုး..တိုးတက်လာနေရင်..ကျတော်တို့ အောင်မြင်မှာ သေချာတယ်။ သိုင်းဝိဥာဉ်ဌာနက ခန္ဓာကိုယ် သိုင်းဝိဥာဉ်နဲ့လူကို မလိုလားအပ်ပေမယ့်..ကျတော်တို့က လိုအပ်တယ်။ အခု သူ့မှာ ၁၀ နှစ် သက်တမ်း ဝိဥာဉ်ကွင်း ရှိနေလို့ရော ဘာဖြစ်လဲ..? ကျတော်သိရသလောက်က..သူ့ရဲ့ ဝိဥာဉ်ကွင်းက.. နှစ် ၁၀၀ သက်တမ်း ဝိဥာဉ်ကွင်းတွေ ထက်တောင် ပိုကောင်းသေးတယ်။ ဆရာမကျော့ရိပြောတာကတော့.. ဒီ ၃ လအတွင်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ ဝိဥာဉ်အဆင့်က ၁၃ ကနေ ၁၈ ကို ရောက်သွားတယ်။
ဒီလိုမျိုး ကြီးထွားမှု နှုန်းက..အသုံးမကျဘူးလို့ ပြောလို့ရမလား? ကျင်တောက်ဒူက ” ဆရာမကျော့ကတော့..တကယ့် အသက်ကြီး ဝါရင့် ဆရာမတစ်ယောက်လို နေနေတယ်..ဒါကိုရော မင်း ဂရုမစိုက်ဘူးလား? နေ့ဘက်မှာ သူမ ဘယ်လောက်ထိ ကြမ်းကြုတ်နေပါစေ..ညဘက်ရောက်လို့..နူးညံ့လာရင်ရပြီး”။ ဖန်ယု့က ” သူမကို ကျတော် ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်လား?ထို့ နောက်ဆရာမကျော့က ယွီဟောက်ကို သူ့ရဲ့ အတန်းဆီ မခေါ်သွားပဲ..” ယွီဟောက်..ခုနက နင် ဒါရိုက်တာ ဒူဝေလန်နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ..နင်ရဲ့ ပေါင်းစပ်သိုင်းဝိဥာဉ် သက်ရောက်မှုအကြောင်းကို သူ့ကို မေးလိုက်သေးလား? နို..ယွီဝေါက် ခေါင်းခါလိုက်တယ်။ ဆရာမကျော့ရိက ” မဖြစ်ဘူး…နင်ရဲ့ ပေါင်းစပ်သိုင်းဝိဥာဉ်စွမ်းအား အကြောူ်းကို မသိပဲ..နောက်ထပ် ပြိုင်ပွဲမှာ နင်ဘယ်လို မသုံးပြုရမလဲ? ဒီလို လုပ်လိုက်..နင်ပြန်သွားတဲ့အခါကျရင်..ဝမ်တုံကို…ဒီအကြောင်း..ဒါရိုက်တာ ဒူဂေလန်ဆီ ပေးမေးခိုင်းလိုက်။ ဝမ်တုံ..? ယွီဟောက် ကြောင်သွားတယ်။
ဆရာမကျော့ပြုံးပြလိုက်ပြီး… ” နင်က ဝိဥာဉ်လက်နက်ရဲ့ အတွင်းစာည်းတပည့်ဖြစ်သွားပြီးလေ..ဒါကြောင့်.. ဒါရိုက်ဒူနဲ့ နီနီကပ်ကပ်မနေပဲ..ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ ဆရာဝမ်ရန်က နင်ကို..အရမ်း သဘောကျနေတာ..ဒါကြောင့်..နင်လေ့လာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်ချထားရမယ်။ နင် နည်းနည်းတော့..ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ဆရာဖန်ယု့က နင်ကို..ပိုတော်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သူသင်ပေးလိမ့်မယ်..၊ ငါအပါအဝင်ပေါ့။ ငါက သိုက်းဝိဥာဉ်ဌာနက ဖြစ်ပြီး..ဘာလို့ ဝိဥာဉ်လက်နက် ဌာနကို မျက်နှာသာပေးတာလဲဆိုတာ နင်သိချင်မှာပေါ့..။ ငါပြောပြလိုက်မယ်.. ဆရာဖန်ယု့က..ဆရာမရဲ့ ယောကျာ်းပဲ😱၊ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ယောကျာ်းကို ပိုအားပေးရမှာပေါ့”။ ထိုအချိန်မှာပဲ..ဆရာမကျော့က သူမရဲ့ ဘယ်ဘ်ပြါးကနေသူမကပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ခွာပြလိုက်တယ်။ ယွီဟောက် ” စိန်စပ်တဲ့ ဆရာမကျော့က ဖွားဖွားက ဒီလောက်ထိ လှပနေမယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ဘူး။
ဆရာမကျော့က သူမရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို ပြန်ကပ်လိုက်တယ် ” ငါရဲ့ သင်ကြားမှု နည်းစနစ်ကြောင့် ငါဒီလိုမျိုး..ရုပ်ဖျက်ထားရတယ်။ အရင် ငါတို့ သင်နေကြ အခန်း ၁ ဆီကိုပဲ ပြန်သွားလိုက်။ နင်က ဆရာဖန်ယု့ရဲ့ အတွင်းစည်း တပည့် ဖြစ်တာကို လျိုဝှက်ထားရမယ်။ နောက်ပြီး..ညနေပိုင်းမှာ နင် ငါးကင်ရောင်းနေတယ်လို့ ငါကြားတယ်။ အဲတာကို ရပ်လိုက်တော့..နောက်ဆို နင်မှာ အချိန်မပိုတော့ဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့..နင်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဝိဥာဉ်လက်နက်ဌာနက စီစဉ်ပေးမယ်။ ဒီဌာနက နင်ကို ဘယ်လို ပြုမူဆက်ဆံလဲ ဆိုတာ နင်သိလာလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီး ယွီဟောက်..အတန်းထဲကို သွားလိုက်တယ်။ ” အတန်းထဲ ဝင်ပါရစေ..”ယွီသေယက်အော်လိုက်တယ်။ ” ဝင်လာပါ..” ဆရာဝမ်ရန် ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ယွီဟောက်အတန်းထဲ ဝင်လာချိန်မှာ..ကျောင်းသားတွေ အာူလုံးရဲ့ဘအကြည့်က သူ့အးဆီ ရောက်သွားကြတယ်။ ပထမနှစ်ရဲ့ အတန်း၎ တန်းထဲမှာ ပထမနှစ်က သန်မာဆုံးအတန်းပဲ။ ဝမ်ရန် ပြုံးလိုက်ပြီး ” ယွီဟောက်..မင်းလာတာ အချိန်ကိုက်ပဲ..ငါတို့အခု..အခန်းး ၁ ရဲ့ အတန်ခေါင်းဆောင်ရွေးဖို့ ဆေ့းနွေးနေတာ။ ကျောင်းငါးတွေ ခွဲလိုက်ပေမယ့်… ဝမ်တုံ၊ယွီဟောက် ရှောင်ရှောင်တို့က တစ်တန်းထဲမှာ ထိုင်ရတယ်။ တိုက်ဟူဘင်၊ ကျူလု့နဲ့ ချိုက်ရာ့ကျိတို့က သူ့ရဲ့ အနောက် ၂ တန်းမှာ ထိုင်နေတယ်။ ဝမ်ရန်က ” အခု..အတန်းခေါင်းဆောင်နဲ့ ဒု အတန်ခေါင်းဆောင်ကို ရွေးချယ်နေတယ်။ ငါတို့အတန်းမှာ.. တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတာနှင့်အညီ..အတန်းခေါင်းဆောင် ၂ယောက်က တစ်ခုစီ တာဝန်ယူရမယ်။ လတိုင်း အတန်းခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်မယ်၊ အခု အရင်ဆုံး..မဲထည့်ခိုင်းမယ်။ဝမ်ရန်က ကျောင်းသင်ပုန်းမှာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးသမား နာမည်ရေးလိုက်တယ်။ တိုက်ခိုက်ရေးစာရင်းထဲမှာတော့..ဝမ်တုံ၊ တိုက်ဟူဘင်၊ ကျော့စီချန်၊ဟန်ချူထင် နဲ့ဝူဖုန်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ် ဝိဥာဉ်မာစတား စာရင်းထဲမှာတော့.. ယွီဟောက်၊ ကောကျင်ရွှန်၊ လန် စုစုနဲ့ လန်လု့လု့တို့ရဲ့ နာမည်ကို ရေးချလိုက်တယ် အပိုင်း ၃၄ မျှော်